Ri Ku Dhalatay IL Kaliya ! Yaab - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Ri Ku Dhalatay IL Kaliya ! Yaab
Abuurta ILLAAHAY ma aha mid aynu mallaysan karno mana habboona in haddii aynu arrin mucjiso ah aragno aynu la yaabno, laakiin waxa habboon in marka aynu wax inaga yaabiya aragno dib u xasuusano awoodaha Ilaahay ee aan marnaba la mallaysan Karin.
Dalka Hindiya waxa ka dhacday arrin Mucjiso ah oo Dadka Dalkaasi ku dhaqan aad uga yaabisay oo aanay hore u arag kadib markii Dadka ku dhaqan Tuulada Asam ay arkeen Ri u dhalatay mid ka mid ah Xoola Dhaqatada ku nool tuuladaasi oo kusoo dhalatay IL kaliya oo kaga taala badhtamaha madaxa.
Dadka tuuladaasi ku dhaqan qaarkood ayaa aaminey inay tahay arrin mucjiso ah halka ay kuwa kalena ka aamineen inay tahay noole laga barakaysan karo, balse Dhakhaatiirta arkay Ridan Isha kaliya ku dhalatay ayaa waxay sheegeen arrin taasi ka duwan, waxaanay ka dayriyeen inay Ridani muddo dheer sii noolaato, laakiin odhaahdaasi waxay noqotay waxba kama jiraan oo waxay nooshahay muddo toddobaado ah.
Run ahaantii waxay ina tusinaysaa Awooda Ilaahay ee aan xudduuda lahayn oo ay waajib inagu tahay in aynu ku cibro qaadano.